Istaraatijiyad guuleysata oo isbarbar yaac ah marka la qiyaasayo tirooyinka
Istaraatijiyad guuleysata oo isbarbar yaac ah marka la qiyaasayo tirooyinka04
Thomas M. Cover wuxuu weydiiyay su'aasha soo socota ee yaabka leh sanadkii 1987 ee "Dhibaatooyinka Furan ee Wada Xiriirka iyo Xisaabinta": Ciyaaryahan \_(X\_) wuxuu u qoraa laba lambar oo dabiici ah oo kala duwan oo aan kala sooc lahayn \_(A\_) iyo \_(B\_) labo midna Warqad sibiibiq ah hoos ugu dhig miiska. Ciyaaryahan \_(Y\_) hadda si aan kala sooc lahayn u xushaa mid ka mid ah waraaqahaas, wuxuu arkaa lambarka oo hadda waa inuu go'aansadaa inuu lambarkan ka yar yahay ama ka weyn yahay lambarka kale ee weli miiska saaran.
Ciyaaryahan \_(Y\_) ma soo rogi karo kaarka wajiga. Isagu wuxuu marka hore u oggolaanayaa qadaadiicda inay go'aan ka gaarto sidaasna uu ku helay istiraatiijiyad leh suurtagalnimo guuleysasho \_(50\_%\_) . Ma jiraa istiraatiijiyad kale oo leh ixtimaal sare?
Kahor inta uusan ciyaaryahan \_(Y\_) si nasiib ah u dooran mid ka mid ah labada warqadood, wuxuu go'aamiyaa lambar dabiici ah oo aan loo meel dayin \_(C\_) . Kadibna wuxuu ku wareejinayaa mid ka mid ah labada warqadood si nasiib ah. Hadda wuxuu ku go'aaminayaa sida soo socota: Haddii nambarka la rogay uu yahay \_( \_leq C \_) , wuxuu doortaa lambarka warqadda kale ku yaal kan ugu weyn; haddii nambarka rogaya uu yahay \_( > C\_) , wuxuu dooranayaa lambarka hadda la rogay oo ka weyn. Si la yaab leh, itimaalka guusha hadda waa \_( > 50\_% \_) .
Magaca koowaad ee labada lambar waxaan u dejinay \_(A < B\_) . Markaa mid ka mid ah saddexda kiis ee soo socda ayaa dhacaya isla marka la doorto \_(C\_):
Dacwada 1aad: \_( C \_leq A < B \_) : Markaa suurtagalnimada guushu waa \_(50\_%\_) , maadaama aysan jirin aqoon ku saabsan \_(A\_) iyo \_(B\_) .
Dacwada 2aad: \_( A < B \_leq C \_) : Markaa suurtagalnimada guushu waa \_(50\_%\_) , maadaama aysan jirin aqoon ku saabsan \_(A\_) iyo \_(B\_) .
Xaaladda 3aad: \_( A < C < B \_) : Markaa suurtagalnimada ku-guuleysiga waa \_(100\_%\_) , maxaa yeelay haddii \_( B \_) rogo marka hore, qofku wuxuu la joogayaa \_( B \_) iyo haddii \_(A\_) marka hore waa la rogrogaa, waxaad u \_(B\_) , markaa waxaad had iyo jeer doorataa tirada weyn.
Waxaa la yaab leh, istiraatiijiyaddan sidoo kale loo adeegsado nolol maalmeedka: Tusaale ahaan, haddii ay tahay inaad isla markiiba go'aan ka gaarto ama ka soo horjeedo iibsashada alaabta adigoon awoodin inaad hesho dalab isbarbardhig ah, waxaad naftaada u dejisay xadka maaliyadeed hore. Haddii xaddidan la buuxiyo qiimaha dhabta ah, iibsiga waa la sameeyaa - haddii kale maahan.